Fanarenana ny Rovan'Antananarivo :: Mandroso tsikelikely ny asa fanamboarana eny Manjakamiadana • AoRaha
Fanarenana ny Rovan’Antananarivo Mandroso tsikelikely ny asa fanamboarana eny Manjakamiadana
Tetikasa fanilon’ny fitondrana amin’izao fotoana izao ny hamitana ny fananganana ny Rovan’Antananarivo mialoha ny 26 jona 2020. Efatra amby roapolo taona lasa izay (6 novambra 1995) no nahamay ny lapan’i Manjakamiadana, ilay rova manerinerina eto an-tampon’Imerina. Mbola tsy tafarina tanteraka ity harem-pirenena goavana ity hatra­min’izao na dia efa maro ihany aza ny hetsika natao ho amin’ny fanarenana azy.
Maro ny olona no velom-panontaniana sy fanahiana ny amin’ny mety tsy hahavitan-dry zareo ny asa rehetra
alohan’io daty voatondro io. Nilaza kosa Razafiarison Francis tale jeneralin’ny kolontsaina fa efa misy ny asa vita ary misy ny mbola eo an-dalam-panamboarana.
«Lapa hazo ny Rovan’ Antananarivo no nosaronana rindrim-bato. Io vato tazana ety ivelany io no tena asa
goavana izay efa saika vita tamin’ny folo taona lasa. Izany hoe efa vita ireo mana­hirana amin’ny asa fanarenana. Ilay hazo ao anatiny sisa no harafitra mba hamerenana ny maha izy azy indray ny Lapan’i Manjakamiadana. Izay mantsy no fepetra takina hahatonga azy ho vako-pirenena”, araka ny fanazavan’ ity tompon’andraikitra ity.
Raha ny hita eny an-toe­rana dia mandroso ny asa fanarenana ny lapan’i Manja­kamiadana. Asa iandraiketan’ny minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina. Ny orinasa Colas no nahazo ny tolo-bidy ka manatanteraka ny fanarenana ny Rova.
« Ny olona no miandry hoe tsy ho vita ny asa fa araka ny fanamby napetraky ny Fanjakana dia tsy maintsy vita tsara ny asa fanarenana. 26 jona 2020 no tanjona », hoy ny tsindrim-peo nataon’ny tale jeneralin’ny kolontsaina.
Fisandohana ho Bianco :: Nosamborina ny zandary adjidà-sefo iray
Fanararaotam-pahefana tany Analanjirofo :: Voaheloka higadra dimy taona ny talem-paritry ny asa vaventy iray